सेक्सका लागि उपयुक्त समय कुन ? – MEDIA DARPAN
सेक्सका लागि उपयुक्त समय कुन ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ९ माघ २०७४, मंगलवार १५:३१
एजेन्सी । सेक्सको विषयलाई लिएर आफ्नो यौनसाथीसंगको संबन्ध नबिग्रियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ रु यदि तपाईं आफ्नो यौनसाथीसंग सेक्सको भरपूर आनन्द उठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई केही महत्वपूर्ण कुरा थाहा हुनु आवश्यक छ । यस्तै कुरा पत्ता लगाएका छन् जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताले । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धानकर्ताहरूले सयौं महिलामा गरेको अनुसन्धानमा कुन बेला सेक्स गर्दा महिलालाई आनन्द आउछ भन्ने पत्ता लगाएका छन् ।
सेक्सोलोजिष्टका अनुसार महिनावारी पूरा भएको ५ देखि ७ दिनमा महिलाहरू सेक्सको मूडमा हुन्छ । यसबेला सेक्सका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले महिलाको ब्रेन वेब्समाथि धेरै अनुसन्धान गरेका थिए । जसमा महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिनमा सेक्स गर्दा बढी आनन्दको अनभूति हुने पत्ता लागेको थियो ।
भर्जिनिया युनिभर्सिटीका साइक्रियाट्रिक मेडिसिनका प्राध्यापक क्लेटनका अनुसार महिनावारीको अवधिपछि महिलामा सेक्स इच्छा जागृत हुनु स्वाभाविक हो । यो समयमा गर्भधारणको सम्भावना बढी पनि हुन्छ ।
महिलाले महिनावारीपछिको ५ देखि ७ दिनसम्म भरपूर सेक्सको आनन्दको चाहना हुने गरेको बताएका थिए । यो अवधिमा गरेजस्तो सेक्सको आनन्द अरू दिनमा नहुने उनीहरुले बताएका थिए । यद्यपि केही यौनमनोविद्ले भने सेक्सका लागि कुनै खास समय या दिन नहुने बताउने गरेका छन् ।
यी नायिकाको यस्तो अवतारले तात्ला बलिउड ?